भर्खरै मलेसियाबाट आयो नेपाली कामदारको यस्तो सबैलाई रुवाउने खबर – पुरा हेरी शेयर गरौ ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै मलेसियाबाट आयो नेपाली कामदारको यस्तो सबैलाई रुवाउने खबर – पुरा हेरी शेयर गरौ !
काठमाडौँ — गोरखाका रितेश गुरुङ कार्यस्थलबाट क्याम्पभित्र छिर्दा बेडहरू ठीक ठाउँमा थिएनन् । सबैका दराज फोरिएका थिए । ‘मेरो पर्समा ३ हजार रिंगेट थियो । मोबाइल थियो,’ उनले सुनाए, ‘नेपाली १० रुपैयाँ मात्रै छाडिदिएछन् । बाँकी सबै लगेछन् ।’
सिंहदरबारभित्रै घुसेर नेता पूर्वसांसद खतिवडाले दिए कम्युनिस्ट मन्त्रीलाई यस्तो झड्का